က်မၼာေရးႏွင္းဆိုင္ေသာ Archives - Alinnthit
ဖုန္းအသုံးမ်ားတဲ့သူတိုင္းလုပ္ေပးသင့္တဲ့ မ်က္စိအားေကာင္းေစတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဖုန္းအသုံးမ်ားတဲ့သူတိုင္းလုပ္ေပးသင့္တဲ့ မ်က္စိအားေကာင္းေစတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အခုေခတ္မွာ လူတိုင္းလိုလို ဖုန္း၊ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳၾကၿပီး မ်က္စိကိုတစ္ခ်ိန္လုံးအနားမရေအာင္ ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ screen အလင္းေရာင္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနတဲ့အခါ ေရရွည္မွာ မ်က္စိကိုထိခိုက္လာေစပါတယ္။ screen အလင္းေရာင္အၾကည့္မ်ားလို႔ ပင္ပန္းၿပီးအားနည္းေနတဲ့ မ်က္လုံးေတြကို ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းေစၿပီး အျမင္ၾကည္လင္ေစဖို႔ ေန႔စဥ္လုပ္ေပးသင့္တဲ့ မ်က္လုံးေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (၁) ႏွစ္မိနစ္မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္း […]
အစာမကြေရင် ညအိပ်ယာမဝင်ခင် ပန်းသီးရှာလကာရည်သောက်လိုက်ပါ
ညအိပ်ယာမဝင်ခင် ပန်းသီးရှာလကာရည်သောက်သုံးခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ပန်းသီးရှာလကာရည်ကိုရေနဲ့ရောပြီး အိပ်ယာမဝင်ခင်သောက်သုံးတာဟာ ကျန်းမာရေးကို များစွာအထောက်အကူပြုနေပါတယ်။ အစာမကြေခြင်း ညနေခင်း ဒါမှမဟုတ် အိပ်ခါနီးမှာ အစားများများစားမိလို့ အစာမကြေဖြစနေရင်တော့ ပန်းသီးရှလကာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းကို ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ရောပြီး ရေနွေးနဲ့ အိပ်ယာမဝင်ခင် နာရီဝက်အလိုမှာသောက်ပေးပါ။ အဝလွန်ခြင်း ပန်းသီးရှလကာရည်ကိုသောက်သုံးပေးတာဟာ […]
ဒူးနာ၊ ဒူးကိုက်၊ ဒူးယောင်နေသူများ အတွက်
ဒူးနာ၊ ဒူးကိုက်၊ ဒူးယောင်နေသူများ အတွက် မိတ်ဆွေ ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းသည့်ဆေးမျှဝေပါရေစ ဒူးနာဒူးကိုက်ဒူးယောင်နေသူများ အတွက် ရဲယိုသီးမှည့် ၆လုံးအနှစ်တိုက်ချပါ အေစ့များဖယ်ထုတ်ပါ ။ ရဲယိုအနှစ်ဆတူ ဓါတ်ဆီရောပြီး ဖန်ပုလင်းထဲထည့် နေရောင်၌ ၃ရက်ထားပြီး ယောင်သည့် နေရာလိမ်းပေးပါ။ မှတ်ချက်။ ။ ဆေးအနှစ်ကို တနေ့ ၃ကြိမ်လိမ်းပေးပါ ။ […]
သားအိမ်မှာ ရေအိပ်တည်တာ ၊ဆီးကျောက်တည်တာ ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ.
သားအိမ်မှာ ရေအိပ်တည်တာ ၊ဆီးကျောက်တည်တာ ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ. သားအိမ်ရေအိပ်နှင့်ကျောက်ကပ်အတွက် ကျောက်ဖရုံသီး သားအိမ်မှာ ရေတည်တာခွဲစရာမလိုတော့ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ချိူ့မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သားအိမ် ရေတည်နေရင် ကျောက်ဖရုံသီး တစ်လုံးကို ရေစင်ကြယ်စွာဆေးကြော၍ ညဘက်အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ ဗိုက်နေရာမှာထားပြီး ၃ ရက် မှ ၇ ရက်အတွင်း ဖက်အိပ်ပေးပါ ။ ရက်ပြည့်တာနဲ့ […]
February 12, 2021 Alinnthit 0
ရြာဓေလ့အပ်ဳိစင္ေလးတစ္ေယာက္လင္ေကာင္မေပၚပဲဗုိက္ထြက္လုိ့ ေဆးနည္းေပးလုိက္ေသာအခါ. ေဆးကုသိုလ္ ရွယ္ေပးပါ.မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္သိရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ႀကဳံခဲ့ရတဲ့သေဘၤာ႐ြက္အစြမ္း ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ေဘးက ၂၂ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမေလးေရာဂါစျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔စျဖစ္တဲ့ ေရာဂါဟာ ဗိုက္မွာ ဘာရယ္မသိတဲ့ အလုံးေလးစတည္လာပါတယ္။ အဲ့မွာ ေတာဓေလ့ ျမန္မာပီပီအခ်ိဳ႕က ဗိုက္ႀကီးတယ္ေျပာလို႔ေျပာ လင္ေျပာရမွာရွက္တာေနမွာဆိုလိုဆိုနဲ႔မိဘေတြကလဲ႐ိုးခ်က္သားသမီးကိုမယုံပဲ သူမ်ားေျပာစကားနဲ႔ ကေလးမေလးကို စတင္ၿပီး မၾကည္ပါေတာ့တယ္။ ကေလးမေလးမွာ […]
သွေးတိုးရောဂါအတွက်လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့သူတစ်ဦးရဲ ဆေးနည်း ခေတ်တွေ နဲ့ အညီ တိုးတက်လာတဲ့ နောက်မှာတော့ လူတွေဟာ ယခင်ကလောက် အစားအစာအတွက် ပြင်းထန်စွာ ရှာဖွေစရာမလိုတော့ပါဘူး။စားချင်တာ များအတွက် မိမိဆီမှာ ပိုက်ဆံရှိဖို့သာ လိုအပ်ပြီးတော့ စားလိုတာများကို ဆန္ဒရှိသလို စားသောက်လို့ ရနေတဲ့ ခေတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလို အစားအသောက်ဟာ ရာသီစာ အဖြစ် […]
February 9, 2021 Alinnthit 0
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်အတွက်ဆေး သင့်ရှယ်ရာတစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်အတွက်ဆေး တစ်နေ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနေသော အမတစ်ယောက်မှ … … မောင်လေးစိုင်းမင်းသန့်မင်းကတိုင်းရင်းဆေးနည်းတွေတင်နေတာမို့ အမတို့မိသားစု လက်တွေ့ဆေးနည်းလေးပြောပြပါ့မယ် … ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ အများအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့အမ ကုသိုလ်ရတာမို့ ပြောပြပါခင်ဗျာ … အမရဲ့ အဖေက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြစ်နေတာပါ အမက ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်တယ် […]
February 8, 2021 Alinnthit 0
သုံးခွက်ပဲသောက် ခါးနာပျောက်တဲ့ဆေး ဒါဏ်ဖြစ်ပြီး မကြာခဏခါးနာနေသူများ ကြက်ခြေထောက် သုံးချောင်းကို နူးအိသည်အထိ ပြုတ်ပါ ။ ပြီးလျှင် အသင့်ပြင်ထားသည့်ဂွေးတောက်ရွက် လက်တစ်ဆုပ်ကို ထိုကြက်ခြေထောက်ပြုတ်အိုးထဲသို့ သုံးမိနစ်ခန့်ထည့်မွှေပြီး ကြွေပန်းကန်ထဲသို့ထည့်သောက်ပါ။သုံးကြိမ်သောက် ပျောက်ပါပြီ crd-org ဂွေးတောက်ရွက် အသုံးဝင်ပုံ အရွက်ကို မီးကင်ပြီး ကပ်လျှင် အနာစိမ်း၊ သွေးစုနာများ နုလျှင် […]
February 7, 2021 Alinnthit 0
သွေးတိုးရောဂါကို ငွေအကုန်အကျမရှိပဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေမည့် အစွမ်းထက်နည်းလမ်း (၅)မျိုး သွေးတိုးရောဂါအတွက် ပျောက်ကင်းစေတဲ့ အစွမ်းထက် ဆေးနည်း ၅ နည်းကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်…သွေးတိုးအတွက်တိုင်းရင်းဆေးတွေထဲမှာ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးကတော့ ဒန့်သလွန်ရွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါအတွက် ဆေးနည်းတိုများ – ဒန့်သလွန်ရွက် လက်တစ်ဆုပ်ခန့်ကို ရေစင်အောင်ဆေးကာ ထုထောင်း၍ အရည်ညှစ်ယူကာ ထမင်းစားဇွန်း(၂)ဇွန်းခန့် တနေ့ […]
February 6, 2021 Alinnthit 0
စိုးရိမ္ရတဲ့ေလျဖတ္ျခင္းရဲ႕အစေရွ႕ေျပးလကၡဏာ(၇) မ်ိဳး ေလျဖတ္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္းၾကားဖူးနားဝ ရွိေနတဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေလျဖတ္တာဟာ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားမေ႐ြး ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ ခႏၶာကိုယ္က ေသြးေတြကို ဦးေႏွာက္ဆီကို ေရာက္ေအာင္ မပို႔ႏိုင္တဲ့အခါ ေလျဖတ္တယ္ဆိုတာကို ခံစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ေလျဖတ္ျခင္းရဲ႕အစ စိုးရိမ္ရတဲ့ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာေတြျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ […]